Meerto caado iyo xaalad dhimir | På blodigt allvar
Meertada caadada waxay saamayn kartaa dareenka, fikirka iyo farxadda, hase yeeshee maxaa ugu wacan in dadka qaarkii ay dhibaato siyaado ah ku dhaliso?
Markay meertada caadadu noqoto leexo dabci
Miyaa dabcigaagu iyo xaaladdaadu ay bil walba u leexleexdaan kor iyo hoos? Miyaad iska bedbeddeshaa adadeyg, farxad, murugo ama xanaaq? Taas waxaa sabab u noqon karta meertada caadada. Hoormoonnada ayaa hoggaamiya meertada cadada, dadka qaarkoodna aad bay ugu nugul yihiin isbedbeddelka hoormoonnada. Qaar baa astaamahaas la dhibban oo carqalad weyn ayey ku noqdaan noloshooda dhammaanteed.
Maalmaha ka dambeeya ugxanaynta ayaa inta badan ugu daran haddii xaaladdaadu ay tahay mid isbedbeddesha xilliga meertada caadada. Dabadeed marka caadadu ay timaaddo, waa caadi inaad dareento nefis iyo niyadsami.
Miyaa dabcigaagu iyo xaaladdaadu ay bil walba u leexleexdaan kor iyo hoos?
Waa maxay PMS?
PMS waxay u taagan tahay Premenstrual Syndrome, waxaana sabab u ah isbedbeddelka hoormoonada jirka ee xilliga meertada caadada. PMS waxay badanaa saameysaa dabciga iyo jirkaba, inta lagu jiro xilliga caadada iyo ka horba. Inaad PMS qabto micnaheedu ma aha inaad leedahay hoormoono ka badan dadka kale ee waxaa sabab u ah in, muddada aad ku jirto meertadaada caado, aad uga nugushahay isbedbeddelka hoormoonada. Haddaad PMS qabtid waxaad dareemi kartaa walwal iyo walbahaar, isbedbeddel dabci, oohintaada oo meel dhow jirta, hawlkarnimadaada oo yaraata. Waxaad iyana dareemi kartaa daal, hurdada oo kugu adkaata, jirkaaga oo barara, naaso-tigtignaan iyo madax-xanuun. In gaajo la dareemo iyo rabitaan macmacaan iyana waa caadi.
PMS-ta lafteeda ma aha cudur, ilaa inta astaamaheeda aad u arkayso kuwo sahlan uma baahnid inaad daryeel ka raadsatid. Si kastaba ha ahaatee, haddaad dareemeyso niyadjab xooggan, oo buufis u eg, laga yaabee inay tahay PMS daran oo la yiraahdo PMDS, premenstrual dysphoric syndrome. Haddaad isaga shakisan tahay PMDS, waa inaad xarun daryeel la xiriirtid.
Endometriosis, PMDS, PCOS ama miyom?
Caadadu waxay dhalin kartaa dhibaato xiriir
Dhibaatooyinka caadiga ah ee meertada caadada waa adigoo dareema daal iyo tabardarri. Dadka qaarkiis waxaa ku dhaca niyadxumi iyo walbahaar oo waxaa ka soo hara xanaaq iyo inay galmada ku raaxeysan waayaan. Taasi waxay keeni kartaa kartidarro, dhibsasho iyo welwel ah in dadka ay kaa arkaan in sidaada caadiga ah aadan ahayn. Waxaa laga yaabaa inaad ka fogaato asxaabtaada iyo qoyskaaga, ama saygaaga. Waxaad dareemi kartaa kelinnimo iyo in qalad lagaa fahamsan yahay.
Caadadu waxay abuuri kartaa xishood, cabsi iyo walwal
Dadka qaarkiis caadadu waxay ku abuurtaa dareen ah xishood, cabsi iyo walwal. In dhiiggu iyo suufka loo xirto ay yihiin wax la qariyo oo wasaq ah. Tambooniga xariggiisa ee ka lusha dharka lagu dabaasho ama suuf ka muuqda surweelka, ka warran hadduu qof arko? In la duuduubo oo la qariyo maryaha gogosha ee ay ku daateen dhibcaha dhiigga, si aannan cidi u dareemin.